Ngakho, namuhla sinawo ukuthola ikhambi liyini i-lens "Renu". Lo mkhiqizo eyaziwa kahle kakhulu futhi ethandwa phakathi kwabantu egqoke contact lens. Kodwa imibono ngakho ngesikhathi esifanayo kukhona okuxubile. Futhi ukuqonda kubalulekile ngempela banake lokhu isixazululo, kunzima kakhulu. Ake sizame ukuqonda iziphi izinzuzo nezingozi kufanele lo mkhiqizo, kanye ukuthola ukuthi ngempela kwafana izithembiso umakhi.
Ake uqale nge yokuthi abajwayelene incazelo komkhiqizo. Isixazululo for lens "Renu" - lokhu ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ukuqagela uketshezi ekhethekile yakhelwe isitoreji contact lens esithambile. Ngaphandle kwakhe ayikho into engenakwenzeka. Phela, yokukhanya yakho umane ukuncipha.
Isixazululo "Renu" ama-contact lens - isivikelo amehlo akho. Yena, ngokuvumelana umkhiqizi, akakubangeli yokungezwani komzimba futhi kufanelekile bonke "Izinketho" soft. Okungukuthi, kuba jikelele. Linikeza amafutha, yokuhlanza kanye isitoreji eliphezulu lens isikhathi eside. Ayikho kabi noma umuzwa esivuthayo. Vele okudingayo ukuze zonke abathengi, egqoke contact lens. Kodwa ingabe zonke ngempela? Yini impendulo "Renu" isixazululo ama-contact lens uthola umkhuba? Lokhu asikafezeki alungise.
Okokuqala kubalulekile ukukhuluma mayelana ukuma ukukhululwa umkhiqizo. Hhayi njalo abakhiqizi obakhathalelayo inani izixazululo amabhodlela, bethi "anamathele 'kubafazi ikhwalithi. Prakthiza libonisa ukuthi inkululeko yokuzikhethela yevolumu ukukhiqizwa - isihluthulelo sempumelelo. Ikakhulukazi uma kuziwa isixazululo lens.
"Renu" itholakala "nezakhiwo" abaningi. Lapha futhi "ephaketheni" izinguqulo encane, futhi yakhelwe isikhathi eside. Pharmacy yokukhanya Salon ungathola amabhodlela kusukela namamililitha 60 500. Ethandwa kakhulu, yebo, ujabulele izindlela emaphaketheni esikhulu, kanye "umgwaqo" Izinketho.
By the way, ukuthenga inzuzo, njengoba kwaphawula u-abathengi abaningi, ikhambi elikhulu lens "Renu". Futhi kuthatha isikhathi eside, futhi ke kuvela inani layo likwenza ubone inzuzo enkulu. Impilo imali enkulu, futhi kusho ukuthi sokulibala ungakhathazeki. Ngakho, kuba umnikelo zikhange kakhulu.
Ikakhulukazi uma ucabangela iqiniso ukutholakala kwemikhiqizo. Mhlawumbe, "Renu" isixazululo ama-contact lens - lena izimpahla ethandwa kakhulu futhi evamile ukunikela ukuthenga eziningi "abezindaba" lokhu yokukhanya. Iningi "zifiki" bayokujabulela axazulule lodokotela iseluleko - awayona iseluleko esibi. Kodwa uma kuziwa ejenti ukuthenga, abanye ukwethuka: "Kuthiwani uma ikhambi lens" Renu "sesiphumile, futhi entsha awukutholi?".
Lona nje ukuthi umuntu usuke eduke nokwesaba. "Renu" ungakwazi ngokushesha futhi kalula uthenge ngasiphi ekhemisi lomuzi wakho noma yokukhanya ingaphakathi. Nokho, nge search for ivolumu oyifunayo kungenziwa izinkinga ngokuvamile entula amabhodlela mncane impela (60 ml) futhi ngokwesilinganiso (150). Kodwa nge big "tarami" ngeke kusaba khona izinkinga. Engingakusho nje uma ukuthenga umthamo isixazululo 360-500 ml, futhi kungenziwa ukhohliwe ezinyangeni ezimbalwa ezizayo mayelana ukuthenga okusha oluzayo.
Yiqiniso, kungcono zonke ezinhle - lungeneke, izithembiso ezinhle umenzi kanye neziphakamiso odokotela. Kodwa kanjani izindlela empeleni ngempumelelo? Isixazululo for lens "Renu" kumpendulo yekhasimende wathola kulo mqondo, okuhle kakhulu. Phela indlela senza umsebenzi omuhle nge umsebenzi wabo.
Njengoba kuboniswe, "Renu" - yisisombululo enemisebenzi esifanelana zonke izinhlobo contact lens esithambile. Ngakho, uma usebenzisa, uthi, "KliarBlyu" bese ushintshele "Biomediks" Ngeke kudingeke ukuba ayothatha isikhungo sokunakekela entsha.
Plus, it akakubangeli komzimba. Ngisho emehlweni sizwele ukubekezelela ingress ikhambi le mucosa. Futhi kuyi-lens, ngasendleleni, isikhathi eside Lizoqhubeka izinga layo. Konke lokhu sibonga isixazululo "Renu" onakekela futhi moisturizes yokukhanya. Ngaphezu kwalokho, izizathu uma bephoqeleka lens perenashivaete (isibonelo, hhayi ezinyangeni ezingu-3, kanye no-4), lamanje kusho sonke isikhathi ziyogcina izinga esiphezulu.
Kodwa yilokho kuphela ezinhle. Futhi, njengoba iningi abathengi, izinkinga ziqala. Ngokwesibonelo, bambalwa kakhulu abantu bazi ukuthi usebenzisa "Renu" baye kanye ngesonto ukuze ubambe magciwane lens ezikhethekile. Yebo, ikhambi is ngempela ahlanze kubo, kodwa inqubo ezengeziwe namanje okudingekayo. Futhi nokuqaliswa kwalo kudinga amaphilisi ekhethekile chaza sikhungo lens isitoreji contact. Hhayi inqubo ezimnandi kakhulu.
Yiqiniso, le ndlela kwandisa bachitha izimali. Uma uthenge ibhodlela elikhulu, akukho okufanele ukhathazeke ngakho, kodwa uma incane - kukhona isizathu sokukhathazeka. Ukuphumelela Flow - esinye sezici, okumele uneminye isixazululo lens. Ngaphandle-ke, ngisho noma zikhona izincomo, amakhasimende dela umkhiqizo. Futhi ngaphansi kwesandla ngokuvamile uthola ikhambi lens "Renu". Inani, ngasendleleni, nalapha futhi, ufeza indima ebalulekile. Yini abathengi ngayo?
Nazi lapha nje futhi abhubhise inkohliso owawuthi "Renu" - ithuluzi best for ekunakekelweni lens esithambile. Phela, intengo kwezimpahla impela high. Singasho, ulele kwaze kwaba sekugcineni. Futhi ngokuhamba kwesikhathi, abathengi senqabe kusukela mikhiqizo. Isibonelo elincane izindleko:
"Renu" (isixazululo lens), intengo 360 ml isitsha - ruble 700.
"Renu", 60 ml - ruble 450.
ReNu, 150 ml - ruble 350.
Hhayi idatha best, akunjalo? Ngo ukuncintisana kahle umphumela ofanayo kanye nokuntuleka allregricheskih ukusabela kungaba ngivame ukuthenga isixazululo of 360 ml i-ruble 350, futhi "umgwaqo" okufana izobiza esingaphansi $ 100. It uhlala acabangele ukusetshenziswa eliphezulu ReNu, kanye isidingo eyengeziwe lens yokuhlanza izinqubo - futhi zonke ukukhohlisa kukhona kungaqedwa umkhiqizo wokuziphakamisa. Nokho, odokotela batusa kakhulu igama lakhe. Mhlawumbe ngenxa yokuthi ukuthi isixazululo lens "Renu", intengo zazo kuyahlukahluka ezindaweni ezahlukene Russia, namanje ezingeni eliphezulu. Noma mhlawumbe ngoba kusho amazwe. Futhi ezweni ubhekwa angaphandle engcono.
Ngokuvamile, wonke umuntu unquma wona ngokwawo ukuthi izixazululo kanye izindlela ukuthenga lens. Kukhona imali eyengeziwe? Khona-ke, ngaphandle ukuzisola ukuthenga "Renu". ukonga Okubalulekile? Sizoba ukuthola umkhiqizo othize. Kodwa okungenani kanye ukuzama ReNu kuwufanele. Mhlawumbe amehlo akho "Niyophucwa ngokuvamile" ngokuqondile kule isixazululo. Futhi kuyoba khona ophumayo - kuphela ukukhiqizwa zamanje kanye nokusetshenziswa.
Ukukhetha izibuko: Ukuvikelwa kusho empilweni yakho
Uma amehlo obukhulu, yini okufanele uyenze
Galina Kizima. Garden, imbali ingadi kanye nensimu ngaphandle omningi
Indlela ukupheka kimchi - iresiphi ukuthi you cha azi
Shoes - amaphampu kukhona emuva in fashion!